समयअनुसार माग फेरिन्छ - प्रतिक्रिया - साप्ताहिक
समयअनुसार दर्शकको माग फेरिन्छ (फ्रन्टपेज : क्रेज न्यू लुक्सको) । हरेक क्षेत्रमा युवाहरूको वर्चस्व बढ्दैछ ।
न्यूनतम मूल्य अनि अधिकतम मूल्यका बारेमा पनि जानकारी दिएको भए हामीलाई खरिद गर्न सजिलो हुने थियो (एलजी भरपर्दा वासिङ मेसिन) । आगामी अंकमा यस्ता सामग्रीहरूमा मूल्य पनि उल्लेख गरिदिनुभए आभारी हुनेछौं ।
बिनय बास्कोटा, प्रबिन पोखरेल
नानीजी, अब छिट्टै मिंगलको खबर पनि सुन्न पाइयोस् (यात्रा सन्दर्भ : नानीको नाट्य–संसार), शुभकामना छ ।
साम्राज्ञीको यो चलचित्र हेर्न म उत्साहित छु (साम्राज्ञीको तेस्रो चलचित्र चैत २३ मा) मलाई उनको अभिनय मन पर्छ ।
अरूसँग तुलना गर्न छोडिदेऊ (आत्महत्या प्रयास पत्ता लगाउँदै फेसबुक) । आमा–बुबाले आफ्ना सन्तानलाई अरूसँग दाँज्न छोडिदेऊ । फलानो यस्तो, फलानो उस्तो भन्न छाडिदेऊ । समस्या आफैं समाधान हुन्छ ।
देश शोकमा होइन, केही सीमित मान्छेलाई चाहिँ पक्कै नराम्रो लाग्यो । दुस्मन नै किन नहोस्, एक्कासि सानै उमेरमा बित्दा दु:ख लाग्छ नै (सम्झनामा प्रकाश) । प्रकाशको जय–जयकार गर्नुपर्ने कुनै काम त प्रत्यक्ष रूपमा गरेको देखिँदैन, तर जनयुद्धका बेला धेरथोर सहयोग उनको पनि छ । साथै उनका बुबा प्रचण्डको नेतृत्वमा त्यो काम हुन गयो । तस्बिरहरू हेर्दा भावुक बनायो ।
नयाँ–नयाँ फिचरबिना अब यस्ता ग्याजेटहरूले बजारमा स्थान पाउन गार्‍हो छ (पट्याउन मिल्ने जेडटिईको स्मार्टफोन) ।
अब नेपालको फुटबल क्षेत्रमा सुनौला दिनको सुरुवात भयो (अन्तर्वार्ता : नेपाली फुटबल लगातार ओरालो लागिरहेको छ) । यस्ता प्रतिभाहरूले ठाउँ पाउनुपर्छ । अब क्रिकेटमा पनि लगानी हुनुपर्छ ।
विश्वास राई, विमल चापागार्इं
अब नेपाली युवाहरू पनि निकै अघि बढिसके (साइन्स एन्ड टेक्नो : नेपालीले बनाएका केही चर्चित एन्डोइड एप्स) । प्रविधिका क्षेत्रमा नेपालले पनि राम्रो फड्को मार्दैछ ।
यसको मूल्य कति पर्छ (तीव्र गतिको कार) ? यो पनि उल्लेख गरिदिए हुन्थ्यो ।
अवश्य पनि त्यो दिन फर्किन्छ (खेलकुद : के नेपाली क्रिकेटको दिन फर्किएला ?) । नेपालले प्रतिस्पर्धामा अरूलाई उछिन्नेछ ।
बधाई छ टेनिस खेलाडी क्यारोलिनलाई (मैदानबाहिर : क्यारोलिन भइन् ह्दयकी प्रेमिका), शुभकामना छ ।
यो काम वाहियात लाग्यो (थिएटर र रिहर्सलबिना नि:शुल्क नाटक हेर्ने अवसर) । सबैले काम गरेर देखाउनुपर्छ अनि जनताले पत्याउँछन् । नेताहरू चुनावमा मात्र मतदाताको घर पुग्छन् ।
सबै युवा उम्मेदवारलाई शुभकामना (बहस : मैदान तन्नेरी उम्मेदवारहरू) । गफ गरेर मात्र होइन, काम गरेर देखाउनुस् ।
सबैलाई नेपाली किबोर्ड र पात्रो नभै हुन्न (नेपालीले बनाएका केही चर्चित एन्ड्रोइड एप्स) । यी दुई एप्लिकेसन अत्यावश्यकजस्तै भैसके । यस्तै काम लाग्ने एप्लिकेसनको अपेक्षा गरेका छौं ।
के गर्नु, असफल भएपछि कुनै कारण त चर्चामा आउनैपर्‍यो (केकीलाई ऋचाको सात प्रश्न) । जे होस्, पढ्दा रमाइलै लाग्यो ।